Booliska Somaliland oo ku kala ceyriyay bannaan-baxayaal | KEYDMEDIA ENGLISH
Booliska Somaliland oo ku kala ceyriyay bannaan-baxayaal
Ciidanka Booliska Soomaaliland, ayaa rasaas ku furay, mudaharaadayaal ay hoggaaminayeen mas’uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo UCID.
HARGEYSA, Soomaaliya – Xarunta maamulka gooni u goosadka ah ee Soomaaliland ayaa maanta marti galineysa banaanbax ay dhigayeen Xisbiyada Mucaaradka Soomaaliland ee WADDANI iyo UCID, kaasoo ay ku dalbanayaan in Xukuumadda Muuse Biixi qabato doorasho aan waqtigeeda dhaafin.
Banaanbaxayaasha ayaa ku dhwaaqayey ereyo ay ka kaga soo horjeedaan Madaxawynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay ku eedeyeen in uu doonayo dib udhigida doorashada Madaxtinimo ee Somaliland, ka hor inta aan Ciidamada Booliska rasasladhaceen bananbaxayaasha.
Sida uu xaqiijiyay Guddoomiyaha Xisbiga WADANI Cabdiramaan Cirro oo bannaan-baxa hor kacayay, waxaa rasaarta boolisku furay ku dhaawacmay Xildhibaan Barkhad Batuun, masuuliyiin kale iyo Shacab, kuwaas oo la geeyay Isbitaalka Magaalada Hargeysa, halka ay jiraan shaqsiyaad xabsiga la dhigay.
Cabdullaahi Maxamed Daahir [Cakuse] Wasiirkii hore ee Warfaafinta Somaliland ayaa ka mid ah masuuliyiinta xabsiga loo dhaadhiciyay. Cukuse ayaa ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga Waddani, halka Muniir Axmed Cigaal, uu xubin sare ka ah Xisbiga WADDANI uu isna dhaawac soo gaaray.
“Mudaharaadku waxa uu si rasmi ah u bilaabmayaa Maalinta Sabtida ah Lixda Gobol & Degmooyinka Somaliland, Saaka annaga oo dooneyna in aan dadka siinno wacyigelin ayaa naloo adeegsaday Xabad nool, sunta gaaska ah, xadhig iyo Jidh-dil oo sharci darro iyo kelitalisnimo ah.” ayuu yiri Musharax Madaxweyne Cirro.